Inona no mitranga mandritra ny fadim-bolana? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Inona no atao hoe menopause yahoo - ahoana no hamahana izany?
Inona no atao hoe menopause yahoo - ahoana no hamahana izany?
Inona no mitranga mandritra ny fadim-bolana?
Transcriber: be dia be ny mistery sy ny fisafotofotoana momba ny fadim-bolana, ka dia haka minitra vitsy manaraka aho mba hilaza aminao izay tena mitranga amin'ny vatantsika rehefa mandalo azy isika. Saika azonao atao ny mieritreritra ny fihenan'ny menopause satria niova ny fahamaotiana. Hey, io no mpitsabo aretim-behivavy tianao indrindra, ary eto aho anio hiresaka lohahevitra iray izay hitako fa tena mahaliana: mitsaha-potoana.
Mety tsy dia hitanao fa mampientam-po toa ahy io, nefa mampanantena anao aho raha mahazo izany Aorian'ny tantara mampihoron-koditra dia ho voasambotra koa ianao. Na mandalo azy ianao na mahafantatra olona hoe iza izy, dia ho tsapanao fa tsy misy atahorana. Inona marina ny atao hoe menopause? Raha ny ara-teknika dia voamarina ny 'menopause' herintaona taty aoriana, ny vanim-potoana farany, fa ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa azy io mba hilazana ny halavan'ny fotoana rehefa miova ny halavan'ny fadimbolantsika, dingana iray izay maharitra taona maro ary avy eo izany rehetra izany aorian'izay. .
Ka tsara kokoa ny mieritreritra ny menopause ho tohiny. nanomboka taona lasa izay, nandritra ilay antsoina hoe «menopause». Mandritra ny fahamaotiana dia maharitra an-taonany maro ny fizotrany.
Ny fifindrana mankany amin'ny menopause dia famaranana ny tsingerim-pananahana misy antsika, raha oharina amin'ny fahamaotiana. Raha ny marina, amin'ny fotoana ahaterahantsika dia manana ny atody rehetra izay ho vokarintsika mandrakizay isika, sahabo ho iray tapitrisa ka hatramin'ny iray tapitrisa amin'izy ireo no tsy matotra ary voahidy anaty folôla ao amin'ny ovaire. Rehefa feno valo ka hatramin'ny 10 taona ianao, ny hypothalamus, faritra iray ao amin'ny atidohanao, dia manomboka mamoaka hormonina izay manaitra ireo atody matory ireo, ary ny tsingerina atody isam-bolana dia manomboka mamokatra kilasy hormonina henonao angamba - estrogen.
Ny estrogen, miaraka amin'ny hormona hafa, dia manomboka dihy hormonina marefo izay mahatonga ny atody matotra indrindra handao ny folikeliny ary handeha hamaky fantsom-piterahana fallopiana indray mandeha isam-bolana, izay manamboatra ny arofenitra utérine, ny voan'ny utérine, hampiorenana ny atody, ary rehefa ny atody tsy zezika, ny membrane moka latsaka ary manana ny fe-potoana isika. Ity tsingerina ity dia miverimberina matetika mandritra ny am-polony taona maro. indraindray eo antenatenan'ny efapolo taona, ho lasa tsy ampoizina ny zavakanto famokarana atodinaina.
Tsy manana an'izany atody firy izany isika, ary ny sisa dia mety tsy salama intsony. Ny estrogen dia mety ho ambany kokoa amin'ny tsingerina sasany ary mbola avo kokoa aza amin'ny hafa. Io no fiovan'ny menopause - korontana hormonina, toy ny fahamaotiana, amin'ity indray mitoraka ity rehefa miorim-paka ny tahan'ny estrogen dia ho ambany lavitra noho ny teo aloha izy ireo.
Ireo fihenan'ny estrogen sy ny fiovan'ny hormonina hafa dia mifandraika amin'ny olana ara-pahasalamana toy ny osteoporose, aretim-po, diabeta ary fahamainana amin'ny fivaviana. Ny sasany amintsika dia tsara vintana fa tsy manana na soritr'aretina malemy. Ny sasany kosa mijaly noho ny tsy fahitan-tory, fahasosorana, fahaketrahana, na fihenan'ny filan'ny nofo.
Ary avy eo ny soritr'aretina mahazatra indrindra, ny tselatra mafana - ny lafaoro dia navadika avy tao anatiny. Tsy fantatry ny mpahay siansa tanteraka ny antony hitrangan'izany, fa ny hafanana vokatr'izany dia mamela anao hatsembohana sy tsy fifandanjana. Ny vehivavy sasany aza dia misy soritr'aretina mihoampampana amin'ny fitaintainanana toy ny fisaleboleboana sy ny fahatsapana tampoka izay tsapako fa nisotro be loatra.
Ireo no sasany amin'ny ratsy, fa misy ihany koa ny lafy tsara. Aorian'ny fadim-bolana dia tsy mila miahiahy momba ny vanim-potoana na ny fikotranana ianao, ary ny olona miara-miasa amin'ny lehilahy mamokatra tsirinaina dia tsy matahotra ny fitondrana vohoka tsy ilaina. Manana izany rehetra izany ao aorianao ianao.
Ho ahy, ny fitsaharana dia zavatra lalovantsika toy ny fahamaotiana. Ary toy ny fahamaotiana dia misy traikefa maromaro. Mandray anjara lehibe amin'ny fiaraha-monina koa izahay aorian'ny fadim-bolana.
Fetran'ny taonanao. Ny lanjanao dia tsy misy ifandraisany amin'ny ovaire. Raha heverina fa mandalo fe-potoana ianao.
Inona avy ireo zavatra tsara indrindra azonao atao? Rehefa mijaly ianao, dia saika misy fanampiana foana. Raha mifoka sigara ianao, dia miezaha hiala. Hampihena ny loza ateraky ny aretim-ponao io, mety hampihena ny soritr'aretin'ny fivalanana koa.
Ny fampihenana ny adin-tsaina sy ny fahazoana torimaso ampy dia tsara ihany koa. Mifantoha amin'ny sakafo mahasalama sy voalanjalanja misy kalsioma sy vitamina D ho an'ny taolana mahasalama, ary miezaha hanana fahazaran-tena ara-batana antonony 150 minitra isan-kerinandro, indrindra raha ny fanazaran-tena mitondra lanja toy ny mandeha, mandihy, na mihazakazaka. Raha mahatsapa tsy fahitan-tory ianao, tselatra mafana na soritr'aretina hafa misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny fiainanao dia miresaha amin'ny dokotera.
Aza miantehitra amin'ny andriamby azo entina na antsoina hoe hormonina mitambatra. Tsy voaporofo ireo ary mitera-doza. Misy karazana safidy voasedra sy voasedra, manomboka amin'ny fitsaboana ara-pahalalana momba ny fitondran-tena, hatramin'ny estrogens voadio amin'ny FDA ary ny sasany amin'ireo fanafody tsy hormonina izay mety hanampy be tokoa.
Betsaka ny permutations sy ny fitambaran'ny safidy afaka manome fitsaboana azo antoka ho an'ny vehivavy rehetra. Hevitra iray hafa, manaova mantra vonona. Indraindray rehefa mahazo jiro mafana aho dia miteny amin'ny tenako fa tsapako izany satria mahatsapa izany ny vehivavy mba hampandroso ny maha-olombelona.
Mariky ny heriko ity. Ary avy eo dia vitako mandra-pialany.
Inona avy ireo soritr'aretin'ny fadim-bolana?
mitsahatra amin'ny fananahana:mitsahatra amin'ny fananahanano fotoana tsy anaovan'ny vehivavy fe-potoana intsony. Amin'ity dingana ity, ny ovary dia nijanona tamin'ny famoahana atody ary namokatra ny ankamaroan'ny estrogen.mitsahatra amin'ny fananahanadia voamarina rehefa lasa tsy tonga fotoana ny vehivavy mandritra ny 12 volana misesy.24 des 2019
Inona no dikan'ny hoe menopausal?
Fotoana tsy ara-dalàna.
Tsemboka amin'ny alina.
Olana amin'ny torimaso.
Miova ny toe-po.
Mitombo lanja ary mampihena ny metabolisma.
Inona avy ireo famantarana 10 ambony indrindra amin'ny fihenan'ny fihenan'ny fotoana?
Menopause dia nyfaran'ny fihodinan'ny vehivavy. Ny teny dia afaka mamaritra ny fiovana rehetra alehanao taloha na aorian'ny fijanonanao amin'ny fotoananao, manamarika ny faran'ny taonan'ny fiterahana.25 Mey 2020
Inona avy ireo voka-dratsy ateraky ny fadim-bolana?
Ny fitsaharan'ny vanim-potoana dia matetika mifandray amin'ny soritr'aretina tsy mahafinaritra isan-karazany, ao anatin'izany ny fanahiana, ny fahaketrahana, ny fihenan'ny libido, ny fahamainana amin'ny fivaviana, ny tsy fahitan-tory, ny fifantohana amin'ny soritr'aretina ary ny soritr'aretina vasomotor (tselatra mafana ary ny hatsembohana amin'ny alina). Ireo soritr'aretina ireo dia mety haharitra taona maro aorian'nymitsahatra amin'ny fananahanatetezamita.
Inona no tena mety hanimba ny soritr'aretin'ny menopause?
Fa vitsivitsy mahazatrasoritr'aretina menopausemety hitohy na hahazoratsyrahovianamitsahatra amin'ny fananahanatapitra - toy ny fahamainan'ny fivaviana sy ny fiovana eo am-pelatananao. Mety hampidi-doza anao kokoa koa ny aretina sasany. Ny ankamaroan'izany dia mitranga satria ny vatanao dia mihakely estrogen.
Afaka mahazo Orgasim ve ny vehivavy aorian'ny fadim-bolana?
Ny firaisana ara-nofo mahafa-po dia miankina amin'ny zavatra maro: ny fisian'ny faniriana, ny filana, ny tsy fisian'ny fanaintainana, ary ny fahaizana manatratralevitra.Aorian'ny fadim-bolana, fihenan'ny libido ary fiovan'ny vatantsikaafakaataovy sarotra nymahazotaitra, mahararyeFAfiraisana, ary tsy azo atao ny mamarana.
Inona avy ireo soritr'aretina mahatsiravina indrindra amin'ny fadim-bolana?
Tselatra mafana sy fahamainan'ny fivaviana no roasoritr'aretina indrindramifandray matetikamitsahatra amin'ny fananahana. Hafasoritr'aretinamifandray amin'nymitsahatra amin'ny fananahanaao anatin'izany ny fikorontanan'ny torimaso, ny fitarainan'ny urinary, ny tsy fetezan'ny firaisana ara-nofo, ny fiovan'ny toetr'andro ary ny kalitaon'ny fiainana.21 mart 2017
Inona no vokatra ratsy indrindra ateraky ny fadim-bolana?
mitsahatra amin'ny fananahanamahatonga ny taolanao hamoy ny hakitroky azy. Izany dia mety hampitombo ny mety ho fahatapahan'ny taolana.MenopausalNy vehivavy koa dia atahorana kokoa hiteraka osteoporose. Fahaverezana hozatra mandritra nymitsahatra amin'ny fananahanamety hitranga koa amin'ny taha ambony noho ny teo aloha.
Andro firy amin'ny andro no ratsy kokoa ny soritr'aretin'ny fadim-bolana?
Ny haavon'ny hormonina dia tsy mijanona maharitra mandritra nyandro- mitsangana izy ireo ary lavo. Ho an'ny vehivavy maro dia miova ireo hormonina ireonandritry ny androdiaratsy indrindraaorian'ny filentehan'ny masoandro, anaovana azyhotselatramafimafy kokoa na miteraka vaovaohotselatra, sy hatsembohana amin'ny alina,nandritra nyhariva sy ora alina.21.07.2018
bmc bisikileta tendrombohitra famerenana
Miharatsy hatrany ve ny fadim-bolana rehefa mihantitra ianao?
Vitsivitsy mahazatramitsahatra amin'ny fananahanasoritr'aretina (toy ny fahamainan'ny fivaviana sy ny fiovan'ny fiara fitadiavana firaisana) dia mety hitohy namiharatsy azarahovianamitsahatra amin'ny fananahanaTapitra. Afaka miresaka amin'ny dokoteranao na ny mpitsabo anaoianareomomba ny fitsaboana rahaianao dia mananasoritr'aretina manelingelinaianareo.
Rahoviana ny vehivavy no mandeha amin'ny perimenopause mankany amin'ny fadim-bolana?
Perimenopause dia maharitra mandra-pahatongan'ny fivalanana, ny fotoana tsy avelan'ny atody atody intsony. Tao anatin'ny 1 ka hatramin'ny 2 taona lasa ny perimenopause, dia mihombo ny fidinan'ny estrogen. Amin'ity dingana ity dia vehivavy maro no manana soritr'aretin'ny fadim-bolana. Menopause. Io no teboka rehefa lasa herintaona izay ny vehivavy farany tonga fotoana farany.
Ny faran'ny tsingerim-bolana dia antsoina hoe menopause?
Inona no atao hoe Menopause? Ny menopause dia ny faran'ny tsingerin'ny fadimbolan'ny vehivavy. Ny teny dia afaka mamaritra ny fiovana rehetra alehanao taloha na aorian'ny fijanonanao amin'ny fotoananao, manamarika ny faran'ny taonan'ny fiterahana. Teraka miaraka amin'ny atodiny rehetra ny vehivavy, izay tehirizina ao amin'ny ovaire.
Inona no mahazo ny vatanao rehefa mitsaha-potoana ianao?
Ny fahaverezan'ny estrogen mifandraika amin'ny fadim-bolana dia mifamatotra amin'ny olana ara-pahasalamana maromaro izay lasa mahazatra kokoa rehefa mihalehibe ny vehivavy. Aorian'ny fadim-bolana, matetika no misy ny vehivavy: Osteoporosis. Aretim-po. Tatavia sy tsinay tsy miasa tsara. Mety hampidi-doza ny aretina Alzheimer. Elastika amin'ny hoditra (mihombo ny ketrona)